Howlgalka xamuul ee reer Japan ee kusii jeeday ISS ayaa ku maydhay dab kadib - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » SAYNISKA Howlgalka shixnad diyaaradda ee reer Japan ee ISS ayaa maydhay dabka kadib - BGR
Howlgalka shixnadaha Jaban ee saaran ISS ayaa ku maydhay dabka kadib - BGR
In wax loo diro meel bannaan waa mid aad u adag, aadna u adag. Way sahlan tahay in la iloobo taas, gaar ahaan durdurrada muuqda ee gantaalka dabka oo aan u aragno maalmahan, laakiin sida ugu badan ee goos goosad ah ee ay jiraan, had iyo jeer waa uguyaraan qaar kuwaas oo dhibaatooyin ku haysta jidka. Kani waa kiiska howlgalka xamuulka xamuul ee Japan HTV-8 kaas oo la doonayey in la bilaabo Talaadada laakiin kaas oo dib loogu dhigi doono taariikh dambe sababa la xiriira dab ka dhashay furitaanka.
As SpaceNews wararka Baadhitaankii cirka, ee loogu talo galay Saldhigga Caalamiga ah ee Hawada, ayaa weli taagan dhulka maanta ka dib markii dab ka kacay gantaalka oo wata gantaalada H-2B oo saadaaliyay inuu cirka u sii jeedo.
Markabka xamuulku wuxuu xambaarsan yahay xaddiga xNUMX ton oo xamuul oo loogu talagalay shaqaalaha. dushooda ISS, oo ay ku jiraan baytariyada cusub ee xarunta bannaan lafteeda. Waqti xaadirkan, waxaa lagama maarmaan noqon doonta in la sugo.
War qoraal ah oo ka soo baxay Mitsubishi culus ee Warshadaha, oo ah shirkadda ka dambeysa dayax-gacmeedka, ayaa lagu sheegay in dabku kacay saddex saacadood ka hor billaabidda la qorsheeyay, laakiin faahfaahin ma gelin. waxa sababay dabka ama ilaa xadka burburka gantaalka, barxada ama walxaha kale ee muhiimka ah.
Bilaabashada maanta ayaa dib loogu dhigay 3h05. Waxaan ku aragnay dab agagaarka godka godka. JST
Waxaan hadda isku dayeynaa inaan bakhtiinno dab. # H2BF8
- Adeegyada Furitaanka MHI (@MHI_LS) 10 September 2019
Bilaabashadu wali lama shaacinin, laakiin daahitaanku ma aha inuu sii dheeraado maalmo kooban.
Marka la eego Saldhigga Caalamiga ah ee Hawada, daahitaanku waa inaysan dhibaato keenin. ISS wali waxay haysaa sahay joogto ah oo sahay ah oo muhiim ah, in kasta oo shaqaaluhu jeclaan lahaayeen inay bilaabaan tijaabooyin cusub isla marka ay yimaadaan, shaybaarka-orbit-ka waligiis uma baahna biyo ama hawo lagu neefsado.
Ma jiro qof u muuqda inuu ogaado haddii Dayax-gacmeedka Hindi Moon uu ka badbaaday degitaankiisa khasabka ah - BGR
Haweeneydu waxay ku dhacdaa "semi-coma" ka dib markay isticmaasho kareemka wejiga kareemka leh - BGR
Minecraft 1.2.3 - VIDEO
Doorashadii madaxtinimo ee Tuniisiya: Ennahdha waxay qirtay guuldaradii iyo "kaarar huruud" ah oo ay u direen cod bixiyeyaasha - JeuneAfrique.com
Hooyo Waxay Sameeysaa Digniin Kadib Markii Cunuggeeda Loogu gubay Shahaadada Labaad Hose - SANTE PLUS MAG
Waqtigu wuu socdaa si magacaaga loogu diro Mars meeraha '2020 - BGR rover'
DADKA & LIFESTYLE4,637